အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ? - Wall Street English...
Home | ဘလော့ခ် | အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ?
Jul 12, 2018 &VerticalLine;
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဟာ နိုင်ငံပေါင်း ၆၇ နိုင်ငံရဲ့ တရားဝင် ဘာသာစကားဖြစ်ပြီး ပျှမ်းမျှ လူဦးရေ ၁.၅ သန်းက အဓိက ဘာသာစကားအနေနဲ့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ iPhone ကို သဘောကျတာမျိုး၊ နိုင်ငံခြားက တင်သွင်းတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေကို နှစ်သက်တာမျိုး အခြေခံကျတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကနေ အရေးတကြီး ကိစ္စရပ်တွေအထိ
နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်း ဆက်ဆံရာမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားက မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် iPhone ကို ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေဖို့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ထုတ်လုပ်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ ဈေးသင့်တင့်စွာနဲ့ ရောင်းချနိုင်ခဲ့တာကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသာ
လိုအပ်ချက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလို အခွင့်အရေးကောင်းတွေကို ရဖို့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရဲ့ အရေးကြီးပုံနဲ့ အတိုင်းအဆမရှိသော အကျိုးအမြတ်တွေကို မြင်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
နိုင်ငံတကာက အဆင့်မြင့်ကျောင်းတွေကို တက်ရောက်နိုင်တယ်။
နိုင်ငံတကာက တက္ကသိုလ် ကောလိပ် အများစုဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ သင်ကြားတာကြောင့် ကျောင်းဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက် IELTS လိုမျိုး သတ်မှတ်ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်း လိုအပ်ချက်တွေ ရှိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ပန်းတိုင်ဆီ အရောက်သွားဖို့ အင်္ဂလိပ်စာဆိုတဲ့ ပေါင်းကူးတံတား လိုအပ်ပါတယ်နော်။
လုပ်ငန်း နယ်ပယ် ပိုမို ကျယ်ပြန့်စေတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဟာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းကို နိုင်ငံတကာမှာ ပိုမို ကျယ်ပြန့်စွာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားဖို့၊ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့ အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဟာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် LinkedIn လို professional network တည်ဆောက်ဖို့ ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာရဲ့ အရေးကြီးပုံကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
ပိုကောင်းတဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ရစေတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အသွေးဟာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပိုမို ကောင်းမွန်သာလွန်တဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေရနိုင်သလို နောက်ထပ် ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွေကို ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးလဲ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်နဲ့ နည်းပညာကို ပိုမို နားလည်စေတယ်။
နည်းပညာ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်ကာလမှာ အချက်အလက် ရှာဖွေခြင်း၊ စာရင်းအတွက် excel sheet အသုံးပြုခြင်းစတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေအတွက် အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန် အများစုဟာ အင်္ဂလိပ်လို ဖော်ပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား အရည်အသွေး လိုအပ်ချက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် နည်းပညာဆိုင်ရာ အခက်အခဲနဲ့ မလွဲမသေ ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။
အနှစ်ချုပ် အနေနဲ့ ပြောရရင်…အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဟာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းတွေ မျှဝေဖို့၊ အဆင်ပြေစွာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့ အဓိက သော့ချက်ပါပဲ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့ သင်ကြားမှုပုံစံ အသစ်တွေ၊ သွားလာရ အဆင်ပြေတဲ့ သင်တန်းချိန်တွေကို သင်တန်းကျောင်းတွေက စီစဉ်ပေးလာကြပါပြီ။ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာရသူတွေ၊ မိသားစုကို အချိန်ပေးရတဲ့ မိဘဖြစ်သူတွေအထိ အခြေအနေမရွေး ၊ အရွယ်မရွေး တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်မှာလဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ် အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းကျောင်းတွေက ရှေးရိုးစဉ်လာတွေနဲ့မတူဘဲ ဆန်းသစ်တီထွင်တဲ့ နည်းတွေနဲ့ ပိုမိုလွယ်ကူ ထိရောက်အောင် သင်ကြားလာကြပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာဖို့၊ တိုးတက်စေဖို့… နည်းလမ်းနဲ့ အထောက်အပံ့ကောင်းများစွာ ရှိနေတဲ့ ဒီနေ့ ခေတ်ကာလမှာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားဖို့ နောက်ကျတယ်ဆိုတာနဲ့ ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားကနေ ပေးတဲ့ အတိုင်းအဆ မရှိသော အကျိုးအမြတ်ကောင်းတွေကို ရယူနိုင်ကြပါစေ။
Reference: Emerging Englishes. (2000, January). English Teaching Professionals, (14), 3-6.